IMEX kwere nkwa ụbọchị iji wulite nke ọma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » IMEX kwere nkwa ụbọchị iji wulite nke ọma
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
June 9 Buzz Day ga-abụ mkpu oku maka ụlọ ọrụ ihe omume ụwa na IMEX.
Kedu ka anyị ga-esi wulite mma n'ime onwe anyị, ụlọ ọrụ anyị na ụwa anyị?
Nke a bụ ajụjụ dị n’ime ụbọchị Buzz ọzọ na IMEX ọhụrụ BuzzHub.
Ndị ọkachamara sitere na Esteé Lauder, Carnival Cruise Line na Global Destination Sustainability Movement ga-ezukọ na 9 June iji tụlee mmetụta nke nkwado na ụwa anyị, ndụ onwe anyị, na otu anyị si agba ihe.
Akụ okirikiri & ike nke okike
Dị ka onye isi oche nke nkwado na Esteé Lauder, ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke nwere ebumnuche gburugburu ebe obibi, Al Iannuzzi, ka edobere n'ụzọ zuru oke iji wepụta isi okwu: Nkwado, Azụmaahịa Dị Oké Mkpa. Ndị sonyere nwere ike ịjụ Al Iannuzzi ajụjụ ha na nke pere mpe, na-ezighi ezi n'oge 'Zute ọkà okwu' nke na-esote.
Al Iannuzzi, Onye isi oche nke nkwado na Esteé Lauder
IMEX nabatara nlọghachi nke onye nyocha ọzara Daniel Fox (onye bụbu onye okwu PlanetIMEX) onye ya na Christine Duffy, Onye isi ala nke Carnival Cruise Line, ga-eso Ihe omumu banyere iwuli elu. Obere nkwa a, okwu a na-ekwuchitere iji wepụta mkparịta ụka na-emeghe, n'eziokwu na echiche obi ike. N'ịbụ onye a maara maka foto ya ndị chiri anya, ọ na-egosipụtakwa ihe ngosi dị egwu Ihe omumu banyere okike.
Christine Duffy, Onye isi oche nke Carnival Cruise Line
In Nkwado siri ike: Okirikiri ga-ewulite ụlọ ọrụ ihe omume anyị chọrọ, Paul Salinger, onye bụbu osote onye isi ahịa nke ahịa maka Oracle na Onye isi ala GMIC n’oge gara aga, yana Chance Thompson, onye ndụmọdụ na-adigide nkwado na Onye guzobere VIRIDESCENT, ji ike kwupụta mkpa ọ dị ịpụ na ụdị ‘ịkpafu-ihe’ na okirikiri, ihe mmeghari ohuru. Ha ga - ebikọ ọnụ maka ndị na - eme ihe omume ka ha chegharịa usoro ha ma kesaa ndụmọdụ bara uru banyere otu esi etinye akụ na ụba okirikiri na ntanetị.
Ndị ọkachamara anọ na-ejikọta ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe na echiche ọhụrụ dị iche iche na-ezukọ iji kerịta olileanya na amụma ha maka ọdịnihu nke ihe omume. Guy Bigwood, Onye isi nchịkwa nke Global Sustainable Sustainability Movement; Janet Sperstad, Onye Nduzi Ngalaba na Madison College; Derrick M. Johnson, Chief Di iche iche Director & Director nke Omume Strategy na Talley Management Group; na Anna Abdelnoor, Co-guzobere & CEO nke isla bụcha akụkụ nke nnọkọ panel, Unpacking a “mma” n'ọdịnihu n'ihi na ihe ụlọ ọrụ.
Ingmepụta ọhụụ ọhụụ maka ụlọ ọrụ anyị
Carina Bauer, CEO nke IMEX Group, na-akọwa, sị: “Thewa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe omume ụwa bịara na nkwụsị siri ike n’oge ọrịa ahụ na-efe. Dika anyi kwusi, a napuru anyi agwa ndi anyi, ihe ndi anyi choro na ‘ụkpụrụ’ anyi. Ugbu a, anyị niile nwere ohere ịhọrọ ihe anyị tinyere. N'okpuru isiokwu bụ '' ịlaghachi nke ọma ', ụbọchị June 9 Buzz anyị na-eweta ndị ọkachamara na-akwado nkwado si n'akụkụ ụwa niile iji nyefee ọdịnaya ndị obodo na-ebute iji mepụta ọdịnihu ọhụrụ. maka ụlọ ọrụ anyị. ”
Ka anyị kwuo ụbọchị
Ulo oru na BuzzHub na-aga n'ihu na Ka anyị kwuo okwu ụbọchị na 16 June na ụbọchị asụsụ German na 23 June. Oge ndị a ga-ekpuchi isiokwu ndị mmadụ na-ekwu ma na-enye ihe omimi miri emi n'okwu ma ọ bụ nsogbu ndị na-ekpo ọkụ, ndị ụlọ ọrụ niile ahọrọ. A ga-ekpughe nkọwa ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya.
Ihe ikpo okwu IMEX BuzzHub na-aga n'ihu rue Septemba na-eweta njikọ mmadụ, uru azụmaahịa yana ahaziri nke ọma na ọsọ nke IMEX America, 9 - 11 Nọvemba. Ndebanye bụ n'efu.
# IMEX21 na #IMEXbuzzhub
More ozi ọma about IMEX
Qatar Airways weputara Boeing 787-9 Dreamliner ọhụrụ ...